Nnukwu Alaska Husky: Ihe You Kwesịrị Knowma - Reeddịrị
Nnukwu Alaska Husky: Ihe You Kwesịrị Knowma
Enweela nkịta nke yiri Siberia Husky nke nwere agba uwe ọzọ? Nke ahụ nwere ike ịbụ Alaska Husky.
A maara Alaskan Huskies maka ike ha na Anam Udeme . Karịa nke ahụ, canines ndị a bụ iguzosi ike n’ihe ma na-ahụ n’anya , ya mere, ha ga-eme mgbakwunye zuru oke na ọtụtụ ezinụlọ.
Want chọrọ ịmata Alaskan Husky nke ọma? Gụọ na chọpụta ihe ndị ọzọ.
Alaskan Husky n’ebido
Alaska Husky dị ka gịnị?
Nkịta na-ahụ n'anya nke nwere ọdịdị izu ezu
Esi zụọ Alaskan Husky
Kedu otu mmega ahụ Alaskan Husky chọrọ?
Kedu ụdị ahụike Husky nwere ike inwe?
Gịnị ka Alaska Husky kwesịrị iri?
Na-elekọta nwoke Alaskan Husky
Ego ole ka ọ ga-eri iji nweta Alaska Husky?
Alaska Husky ọ bụ ezigbo nkịta maka gị?
Alaska Husky bụ ụdị Husky ma ọ bụghị ụdị ya dị iche.
Nke a canine bred bụụrụ a na-arụ ọrụ nkịta , kpọmkwem maka iji na sledding.
Ọ bụ site na mushers ma ọ bụ nkịta mmadụ sled agbụrụ si dị iche iche Inuit nkịta udiri anumanu.
Fọdụ n'ime ụdị ndị a gụnyere Saịberịa Husky , Alaskan Malamute , Nkịta Eskimo, German Shorthaired Pointer, Ókè-ala Collie , Onye Ọzụzụ Atụrụ German , Inuit Husky, na Greyhound.
Ọbara ọbara ejiri mee ihe dabere na ebumnuche onye na-azụ ya. Yabụ ọ bụrụ na onye na-azụ ya chọrọ nkịta sled maka ịgba ọsọ, ọ nwere ike ịzụkọta otu ezigbo bekee Nkọwa na onye Siberia Husky.
Na 2015 , achọpụtara na - n'agbanyeghị ha ọdịiche - Alaska Husky, Alaskan Malamute, na Siberia Husky nile nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa yiri nke a ha bukwa ndi-ikwu Jehova Chukotka sled nkita nke Siberia.
Alaskan Husky nwetara ngwa ngwa na ndepụta nkịta a na-agba ọsọ n'ihi oke egwu ya ososo. Imirikiti Huskies ndị a hụrụ na agbụrụ agbụrụ sled taa bụ Alaskan Huskies.
Alaskan Huskies bụ ibu karịa Siberia Huskies, ma ha nwere ụlọ na-ada ụda. N'adịghị ka ndị ibe ha na Siberia, canines Alaskan a na-enwekarị aja aja.
Crossdị ụkwụ a dị ogologo nwere ogologo ụkwụ, miri emi, sara mbara, ma kechie, ọdụdụ na-adị ha n'azụ. Ọtụtụ n'ime ha na-adị nkịta ọhịa na ọdịdị.
Ndị Huskies a nwere ike ịnwe uwe mkpuchi n'ọtụtụ agba, gụnyere isi awọ, ọcha, oji na ọcha, acha odo odo, oroma, aja aja, ọbara ọbara, ma ọ bụ ude.
Uwe ha bu Obere na ọkara n'ogologo ọ dighi kwa ogologo. Uwe ha dị mkpụmkpụ na-enyere aka na mgbasa nke okpomọkụ mgbe ha na-asọ mpi agbụrụ.
Ha nwere uwe ime mara mma na akwa mkpuchi dị elu karị iji chebe ha pụọ ​​na ihe ndị ahụ ma na-amịpụta sled.
Kedu ka nnukwu Husky a si buru ibu?
Okenye nwoke Alaskan Husky nwere ụdị ọrụ dị n'etiti Iri iri anọ ruo iri isii (21 ka 25 n'arọ), ebe nwanyị toro eto na-eru gburugburu 35 ka 55 pound (17 ka 19 n'arọ). Ma nwoke ma nwanyị nwere nkezi ogologo nke 23 ruo 26 sentimita asatọ na ntozu okè.
Nweta echiche ka mma banyere oke nkịta a ga-esi nweta vidiyo a:
Alaskan Huskies nwere a omume dị jụụ karịa nwanne nne ha Siberia Husky na Alaskan Malamute. Ha nwere ezi-obi na omume enyi n’ebe ndị ha maara nke ọma nọ.
N'ịchọ ịmata ihe ndị bịara abịa, ndị Huskies a na-enwekarị isi na ndị mmadụ na-amachaghị karịa ịta ụta na ha.
Alaskan Husky nwere ike ịbụ ezigbo nkịta ezinụlọ. Ọ hụrụ ndị mmadụ n'anya na nkịta ndị ọzọ ma mara ya dị ka ịnụ ọkụ n'obi cuddler . Ọ hụrụ ụlọ ọrụ nke ụmụ mmadụ ya n'anya ma mara ya maka ịdakwasị ndị mmadụ n'ihi ịhụnanya, ọ bụghị ịchịisi.
Obe a nwere agwa di nro, nke putara na enwere ntukwasi obi n’ebe umuaka no.
Nkịta a anaghị adịkarị ewe iwe , ma ọ ka kachasị mma iji hụ na mmekọrịta dị n'etiti ụmụaka na anụ ụlọ gị. Nke a na-eme ka o doo anya na ọ nweghị nsogbu na-eme na ọnweghị onye merụrụ ahụ.
Alaskan Huskies ọ na-agba agba?
Huskies Alaskan nwere ntụkwasị obi na ịdọpụ sleds ma bụrụ ndị magburu onwe ha na agbụrụ ahụ, mana ha abụghị nnukwu ndị nche. Ngwakọ ndị a bụ ọ bụghị ụtọ nke ogbugbo ; ha pụrụ ile ndị ị na-amabughị anya kama ịkọ ụja iji mee ka ị mata banyere iyi egwu.
Agbanyeghị, dị ka nwanne nne ha Siberia, nkịta a n'anya na-eti mkpu . Ha nwere ike ịkwa ákwá maka ọtụtụ ihe kpatara ya:
Ọ chọrọ ka uche gị dịrị.
Nkịta nwere ike na-eti mkpu dị ka ngosipụta nke nchekasị nkewa.
Husky gị nwere ike na-azaghachi ihe ndị na-akpali ya na gburugburu ya, dị ka arịa ụlọ ọhụrụ ma ọ bụ ụgbọ ala na-agafe n'èzí.
Nkịta na-eti mkpu iji na-akwa ụfụ ma ọ bụ nhụjuanya.
Alaskan Huskies nwere ọgụgụ isi na na-anabata ọzụzụ .
Offọdụ n'ime ha nwere ike ịnwe isi ike, n'agbanyeghị, n'ihi nnwere onwe ha.
Ikwesiri iguzosi ike dika onye ndu mkpọ ma guzosie ike mgbe ị na-azụ Alaska Husky; ma ọ bụghị ya, ha nwere ike ịghọ isi ike na aghụghọ.
Maka nsonaazụ kacha mma, canines ndị a kwesịrị ịdị zụrụ azụ dị ka puppy. Dị ka nwata Izu asatọ , Alaskan Husky dị njikere ịmụta iwu ndị bụ isi.
Oge ọzụzụ kwesiri idobe mkpụmkpụ iji mee ka ọ chọọ ịmata ihe ma nwee mmasị ịmụ ihe ọhụrụ.
Positive mkwado arụ ọrụ kacha mma maka Husky a. Dị ka ọtụtụ nkịta, ha na-anabata nke ọma karịa otuto na ọgwụgwọ ma e jiri ya tụnyere ntaramahụhụ.
Okwu ịdọ aka ná ntị, n'agbanyeghị - ịzụ nkịta a ga-agụnye ụfọdụ ịrụsi ọrụ ike, ndidi, na nnọgidesi ike.
Alaska Husky kwesịkwara inwe ọtụtụ ịkpakọrịta , karịsịa mgbe ọ ka na-eto eto. Wepụta oge gosi ya anụ ụlọ ndị ọzọ.
Ozugbo o mechara ọgwụ mgbochi ya, kpọga ya na ogige nkịta ka ya na ndị nkịta ọzọ nwee ike gwuo egwu ma nwee oge egwuregwu.
Inweta Husky gi ige gi nti
Tupu ịmalite ọzụzụ ọ bụla na gị Alaskan Husky, jide n'aka na ị guzosie ike onwe gị dị ka mkpụrụ ma ọ bụ onye ndu mkpọ. Okwesiri ka o doo anya na Alaska Husky gi ị nọ n'isi nakwa na a gaghị agbagha ikike gị.
Ndị a bụ ihe ole na ole ịme na ihe ị ga-eme dị ka alpha:
Ga-abụrịrị mbụ onye ba abata site n'ọnụ ụzọ.
Onye ndu kwesiri mgbe niile buru ụzọ rie . Nye nkịta gị nri naanị mgbe ị risịrị nri gị.
Mee ka Alaskan Husky pụọ n'ụzọ kama ịgbagharị ya.
A nota ntị na nkịta gị mgbe ọ bụla ọ chọrọ ya. Debe iwu ma nye ya uche gị na-enweghị nkewa naanị mgbe ị hụrụ na ọ dị mma.
Alaska gị ga-ahọpụta ya ebe ihi ụra . Ekwela ka nkịta gị dinara gị n'ihe ndina.
Site na nkwụsi ike na nkwụsi ike, gị Alaskan Husky ga-emesị mụta gee gị ntị dị ka onye ndu mkpọ na ịzụ ya ga-adị mfe karị.
A na-azụ Alaska Husky maka ịdọpụ agbapụ, na, n'ihi nke a, ha nwere ume dị egwu.
Canines ndị a na-egwu egwu ma na-arụsi ọrụ ike, ya mere ha chọrọ ọtụtụ mgbatị ahụ siri ike kwa ụbọchị. Ha choro otutu mkpali nke uche n'ihi ọgụgụ isi ha.
Alaskan Husky choro ọ dịkarịa ala otu awa mmega ahụ kwa ụbọchị. Mgbatị ahụ ị na-eme kwa ụbọchị kwesịrị ịgụnye brisk abụọ 20 ruo 40 nkeji ma ọ bụ oge elekere ịgba ọsọ. Ọ bụrụ na ịnwe ịnyịnya ígwè na-amasị gị, hapụ ya ka ọ sonyere igwe kwụ otu ebe gị na njem gị gburugburu.
Nwere ike ime ka Husky gị sonye na egwuregwu dịka sledding na skijoring , dị ka ndị a ga-enyere ya aka ịmecha ume niile o nwere ma mee ka ọ dịrị mma na ahụike.
Canine a ga - eme nke ọma na egwuregwu dịka agility , nrube isi, nzuko na ozuzu. Ihe omume ndị a ga-enye ya ohere iji rụọ ọrụ ma ahụ ya ma ụbụrụ ya.
Husky gị ga-ekpori ndụ oge egwuruegwu dị ka ọfụma, mana gbaa mbọ hụ na etinyere ogige gị maka nkịta gị. A maara canines ndị a maka ịbụ gbalaga nka . Ha bụ ndị a rụzuru jumpers na diggers.
Debe nkịta gị na ụlọ gị site na iwu ụlọ a ezigbo osisi nsu dịkarịa ala 6 ụkwụ ogologo wuru gburugburu yad gị. Osisi dị nro bụ nhọrọ kachasị mma maka ngere, ebe ọ bụ na Husky agaghị enwe ike ịrịgo ihe ahụ.
Jide n'aka na nkịta gị anaghị etinye aka na ya, agbanyeghị, ọkachasị n'oge ọkụ, anwụ na-acha. O nwere ike ibute ekpo oke ọkụ na Alaska gị Husky ma nwee ike ibute nsogbu ahụike siri ike.
Mgbe ị na-apụghị ijegharị Husky gị, ịnwere ike ime ka ọ na-arụsi ọrụ ike na ụfọdụ ụbụrụ egwuregwu dịka ozuzo na ọchụchọ na akụ ịchụ nta. Ihe egwuregwu puzzle na ihe egwuregwu ụmụaka ga-enye aka mejupụta nkịta a chọrọ maka mkpali nke uche.
Alaskan Huskies nwere ọtụtụ nsogbu ahụike, ọkachasị ndị na-ahụkarị ụdị nne na nna ha.
Ndị na-azụ ihe a ma ama ga - echekwa ụmụ nkịta ha na - agwa gị gbasara nsogbu ahụike ọ bụla nwa nkịta gị na - echekarị ka ị nwee ike ịkwadebe nke ọma maka ọnọdụ ndị a.
Offọdụ ọnọdụ ahụike nwere ike imetụta Alaskan Huskies gụnyere:
Ọdịiche congital nke larynx (na-eme ụda ume mgbe ọ na-eku ume)
Ọrịa nchekwa Lysosomal
Na-aga n'ihu Retinal Atrophy
Husky gi nwekwara ike Alaskan Husky Encephalopathy , nke bu oria anaghi agwo oria nke na egosiputa na puppy. Ọnọdụ a na - akpata nsogbu nhụjuanya n'ihi nkịta enweghị ike ịhazi thiamine nke ọma na nri ya.
Ogologo oge ole ka Alaska Husky dị?
Alaska Husky nwere oge ndụ 10 ruo 15 afọ . You nwere ike inye aka ịgbatị ndụ nkịta gị site na ịkpọrọ ya na vet maka nyocha ọ bụla, na-enye ya nri kwesịrị ekwesị, yana hụ na ọ na-emega ahụ zuru oke.
I nwekwara ike ichebe onwe gị pụọ na mmefu na obi mgbawa nke nkịta na-adịghị mma, dị mkpụmkpụ site na ịnweta nwa gị n'aka ezigbo onye na-azụ ihe.
Alaskan Huskies bụ agile, nkịta nwere ume dị elu, ha chọkwara nri di elu nwee calorie iji kwado ume ha.
Okenye Alaskan Husky na-achọ opekata mpe 1100.
Huskies Alaska dị mkpa chọrọ calorie 1000 ka Huskies nọ n'ọrụ - dị ka ndị na-adọta sleds ma ọ bụ na-ekere òkè na agbụrụ mgbe niile - chọrọ ọ dịkarịa ala Kalori 1800 kwa ụbọchị.
Chọsie ike inye gị Alaskan Husky nri nke nwere opekata mpe 22% protein na abụba 8% .
Mkpụrụ protein dị elu ga-eme ka nkwonkwo nkịta gị sie ike ma kwalite nkwalite ahụ ike, ebe abụba abụba ga-enyere Husky aka ịnọgide na-enwe ogo ike ya.
Alaska Husky dị mma kwesịrị ịnwe nri nke gụnyere mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, anụ, na azụ, ọkachasị Salmọn . Nkịta ndị a ga-aga nke ọma na azụ, nke bụ ihe ọtụtụ nkịta sled na Alaska na-eri.
Zere inye nkịta gị salmọn raw n'agbanyeghị, dika o nwere ike ibu obere ọkpụkpụ na nje.
I nwekwara ike ịzụ nri Husky dị elu nke nkịta. Nye ya Iko 3 to 4 nke nri nkita kewaa abụọ n’ime nri. Nkịta gị kwesịkwara inwe mmiri dị mma n’oge niile.
Ewezuga protein nke anụ, ọtụtụ ụdị azụmaahịa nke kibble nwekwara ike ịgụnye osisi na-edozi dị ka lentil na peas, nke Husky gị ga-erite uru na ya.
Gbalịa ka ị ghara ịzụ nwa nkịta Alaskan Husky nri ndị a:
Nri juputara na oka oka, nke nwere obere mmiri ara, nke nwere mmiri ara ehi
Mịrị na mkpụrụ vaịn
Ugboro ole ka ị kwesịrị inye Husky nri gị?
A ga-enyeju nwa nkịta Alaska Husky ugboro atọ n'ụbọchị . Mgbe o ruru ogo zuru oke (mgbe ihe dị ka otu afọ), ị nwere ike belata oge iji nri abụọ kwa ụbọchị .
Alaskan Husky nkịta dị obughi ndi buru ibu . Ha anaghị erikarị nri mgbe agụụ na-agụghị. Inye ha nri awa abụọ tupu imega ahụ ezuo iji kwado ume ha na ume ha.
Alaskan Husky nwere a uwe nhicha onwe ya mere, ọ na-adịkarị mfe ịlụ nwanyị ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ.
Nkịta a wụsịrị moderately ma choro nchapu ihe abụọ ma ọ bụ ugboro atọ kwa izu .
N'oge oge ịkwafu , n'agbanyeghị, na-atụ anya ịwụfu na ịda mba, mgbe nnukwu aji na-ada.
Ikwesiri ihicha uwe nkịta gị kwa ụbọchị n'oge a. Dịrị njikere iji igwe mkpofu ọkụ na-eme ọtụtụ mgbe, kwa.
Sa ahụ a ga - edebe otu obere Alaskan Husky opekata mpe. Nkịta a anaghị esi isi ma ga - agabiga otu ugboro n’otu ọnwa . Jide n'aka na ị ga-eji shampulu nkịta a nwapụtara anata ahụ mgbe ị na-asa canine gị.
Ya ezé kwesịrị ịbụ kpochapụrụ kwa ụbọchị ma ọ bụ ọ dịkarịa ala ugboro abụọ kwa izu. Jiri nkịta ezé na ezé ezé ma malite àgwà ahụ mgbe Alaskan Husky ka bụ nwa nkịta ka o wee nwee ike ịme ihe ahụ.
Ntuchapu ntu enwere ike ime otu ugboro n'ọnwa . Nwere ike tinye ha n'onwe gị, mana kpachara anya ka ị ghara igbutu ha nke ukwuu iji zere imebi nkịta gị.
Ekwesịrị inyocha ntị Husky gị otu ugboro kwa izu maka ihe ịrịba ama ọ bụla nke mgbakasị, na-acha ọbara ọbara, ọrịa, na wax-ewu. Hichaa nwa nkita gị ntị na-eji ihe nhicha a nwapụtara anabatị na otu bọọlụ owu.
Enwere ụgwọ ụfọdụ ị ga-atụle mgbe ị kpebiri inwe nwa nkịta Alaskan Husky dị ka anụ ụlọ. Maka ndị na-ebido ebido, enwere ego Husky puppy n'onwe ya.
Pumụ nkịta Alaskan Husky sitere na ahịrị ịgba ọsọ kachasị elu nwere ike iri ụgwọ ọ bụla $ 10,000 ka $ 15,000 onye obula! N'aka nke ọzọ, nwa akwụkwọ ahụike Alaskan Husky siri ike na-enweghị agbụrụ agbụrụ sitere n'aka onye na-azụ azụ a ma ama. $ 1,000 ka $ 1,500 .
Ego izizi na ngwa ngwa dịka crate, olu akwa, leash, ụgbọelu, ihe eji ehi ura na ọkwute nwere ike ịbụ ihe efu $ 220 .
Fọdụ usoro ahụike dị ka ịkọ mmiri ma ọ bụ ịpụpụ, gbaa, ule ọbara, nyocha anụ ahụ, microchipping na deworming ga-efu $ 290 , dabere na ebe ibi. Kwa afọ na-akwụ ụgwọ dị ka gbaa, ahuhu na tinye akọrọ mgbochi, nyocha, na mkpuchi anụ ụlọ ga-anọ $ 485 .
Akwụ ụgwọ kwa afọ maka oke nkịta nkịta na nkịta nkịta ga-adị gburugburu $ 235 , ebe mmefu ndị ọzọ dị iche iche dịka ihe eji egwuri egwu, ọzụzụ bụ isi, na ikikere dị ihe dị ka $ 265 otu afọ.
Ebee ka ị nweta Husky ọhụrụ gị
Have nwere nhọrọ ole na ole ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịla ụlọ Alaskan Husky. Y’oburu na ichoro nwa nkita mara nma nke Alaskan Husky, uzo gi kacha nma bu onye na-azụ ihe .
Ekeghị ndị na-azụ ihe niile ha nhata, agbanyeghị, yabụ na ị ga-eme nyocha iji chọpụta onye na-azụlite ntụkwasị obi. Nri breeder nwere ike inye gị akwụkwọ ma ọ bụ asambodo na ya puppy na nne na nna ndidi enyocha ahụ ike .
Alsochọrọkwa ịhọrọ onye na-azụ ihe na-agaghị enwe oge ọ bụla ịhapụ gị ịbịa maka nleta. Nwa nkịta na-ebi na a ebe dị ọcha, saa mbara ha na ndị ha na ha na-akpa nri na ndị mụrụ ha kwesịrị ịna-anọrị.
Ndị a bụ ole na ole reputable breeders ileba anya:
Isi Ihe Amaghi (Minnesota)
Enweghị oge iji ụlọ zụọ nwa nkita ? Nwekwara nhọrọ ịnabata Alaskan Husky. Ptkwado nkịta na-abụkarị ọnụ ọnụ. Na chi, ị nwekwara ike iburu ụlọ nkita ochie nke ahụ abụworị onye a zụrụ azụ n'ụlọ ma mara iwu ndị bụ isi.
Ọ bụrụ na ịmechi maka gị, lelee ụlọ ọrụ nnapụta ndị a na ebe mgbaba ndị lekwasịrị anya na Huskies:
Nzọpụta Dog nke Northern California Sled (California)
Nnapụta Heartland Husky (Oklahoma)
Tahoe Husky Nnapụta (Northern California / Northern Nevada)
Alaskan Husky bụ nkịta nwere enyi na enyi nwere ọdịdị dị jụụ .
Ọ hụrụ ka ya na ezinụlọ ya na-anọrị, ọ ga-enwetakwa àgwà ịla azụ n’ebe ụmụaka nọ.
Egwuregwu a, ike dị elu hụrụ n'anya , ya mere, ọ ga-eme ezigbo enyi maka ndị nwere ụdị ndụ na-arụsi ọrụ ike na ndị na-anụ ọkụ n’èzí.
Chọrọ enyi enyi canine ga-eso gị na-eme egwuregwu ọ bụla kwa ụbọchị? Husky a ga - abu maka ya.
Agbanyeghị, ị ga-enwerịrị ikele na Alaskan Husky bụ a agafeghị oke na nnukwu shedder , ya mere o nwere ike ọ gaghị abụ nkịta kwesịrị ekwesị maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ nfụkasị ahụ ịsacha.
Ọ na-akwakwa ákwá nke ukwuu, yabụ dịrị njikere ị kpesa mkpesa nke ndị agbata obi gị gbasara mkpọtụ ahụ.
You nwere Alaska Husky? Kesaa echiche gị banyere ihe ndị a dị nro na ngalaba nke dị n'okpuru!
Ogologo oge Dachshund: Ihe Knowmara Banyere Dachshund a dị ịtụnanya
ogologo ntutu ojii na tan chihuahua
kedu ka ngwakọta ọkpọ ọkpọ ọkpọ ga -esi buru ibu
ụmụ nkịta french bulldog ọnụ ahịa ọnụ ahịa
nkịta na -amụmụ ọnụ ọchị